Ny tombony amin'ny marketing geofencing - Victor Mochere
Ahoana no hijerena ny coolant motera anao
Fotoana famakiana: 5 mn novakiana
Efa tonga tao an-tsainao ve fa mitsikilo anao ny findainao? Efa noeritreretinao ve ny fomba ahazoanao doka momba ireo entana nokasainao hovidina? Mahazo fampandrenesana momba ny fifanarahana sy fivarotana ve ianao raha vao tonga any amin'ny toeram-pivarotana rehetra? Na nahazo tapakila ve ianao rehefa nandalo kafe na trano fisotroana kafe? Samy miaina izany isika rehetra. Angamba nopotehin'i Google ny kaody amin'ny eritreritsika. Na tetika ara-barotra marani-tsaina fotsiny izany. Ahoana raha misy fomba ahafahanao mivarotra ny vokatrao na ny serivisinao na dia any amin'ny fivarotana / tranokalan'ny mpifaninana aza ny mpanjifa nefa tsy mampahafantatra azy ireo. Ny marketing amin'ny geofencing dia mahatonga izany rehetra izany.
Ao amin'ny lahatsoratra
Inona no atao hoe marketing geofencing?
Ahoana no fiasan'ny geofencing?
Ahoana ny fampiasana geofencing amin'ny mpivarotra?
Ny maha-zava-dehibe ny marketing geofencing
Famerana ny varotra geofencing
Raha lazaina amin'ny teny tsotra, ny marketing geofencing dia rehefa manisy marika toerana ianao - manodidina, trano, na toerana eo amin'ny sarintany nomerika ary raha vantany vao misy olona miditra ao amin'io faritra io, dia alefa any amin'izy ireo ny fanentanana ara-barotra ataonao. Ny marketing geofencing dia tafiditra ao anatin'ny sokajy paikady ara-barotra mifototra amin'ny toerana. Karazana varotra izay ahafahan'ny mpivarotra mikendry mpihaino manana traikefa manokana kokoa. Mampiasa toerana ara-jeografika miaraka amin'ny fanampian'ny GPS sy zanabolana handefasana doka manokana amin'ny toerana ho an'ny mpihaino kendrena.
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny fanentanana ara-barotra amin'ny geofencing dia ny tsy habeny manokana. Midika izany fa ny orinasa na marika amin'ny habe rehetra dia afaka mandray ny varotra geofencing ho safidy. Mipetraka izao ny fanontaniana faharoa: ahoana no hanapahanao hevitra hoe ho lehibe na ho kely ny fefy? Eny, amin'ny ankapobeny dia manana fahafahana manitatra ny sisin-tanin'ny fefy ianao hatramin'ny 1000 metatra ary latsaky ny 200 metatra. Ny marika iray dia manana fahafaha-manao tanteraka amin'ny fampielezan-keviny momba ny varotra geofencing.
Ny fanentananao dia mety ahitana na inona na inona manomboka amin'ny fampiroboroboana, fihenam-bidy, fanasana amin'ny lahatsoratry ny fiarahabana tsotra sao dia te-hijanona izy ireo. Tsy voatery hanimba azy ireo amin'ny tolotra foana ianao. Ankoatra izany, azonao atao ny mandamina ny fampahafantaranao mifototra amin'ny fifamoivoizana amin'ny Internet. Ohatra, raha tojo fikorianan'ny fifamoivoizana mafimafy kokoa ianao amin'ny takariva, dia azonao atao ny mandamina ny fifanarahanao mba hitsidihana amin'io vanim-potoana manokana io mba hahazoana tombony ambony indrindra. Ny Geofencing dia azo zaraina ho dingana tsotra telo:
1. Fanorenana geofence
Ity dingana ity no vao avy noresahintsika, nanapa-kevitra ny faritra iray hamorona geofence ary manomana fanentanana doka ho an'io geofence io. Eny, ho an'ny fefy tsirairay dia tsy mitovy izany.
2. Manampy / manala ny mpihaino
Ankehitriny, inona no dikan'izany? Rehefa misy olona miditra ao amin'ny geofence-nao dia ataovy azo antoka fa ampidirinao ao amin'ny lisitry ny mpihaino dokam-barotra izy ireo. Raha diso ity dingana ity ianao dia tsy ho afaka hiroso amin'ny dingana manaraka. Ary koa, tsy tianao ny handefa spam ireo olona efa nandao ny geofence-nao. Noho izany dia ilaina ny manara-maso ny mpihaino.
3. Fampandrenesana manosika
Izany no dingana natao ny ezaka rehetra. Mandrosoa ary manomboka manosika fampandrenesana amin'ny alàlan'ny lahatsoratra, fampahafantarana amin'ny fampiharana, doka amin'ny tranokala, sy ny sisa.
Ny geofencing dia azo ampiasaina amin'ny fomba maro. Misy fantsona maromaro mifototra amin'ny fepetra takian'ny marikao, mpihaino, fifamoivoizana, ary ny vokatrao sy ny serivisinao azonao isafidianana. Ireto ambany ireto ny fampiasa matetika, fidio izay mety aminao, aza manahy fa afaka misafidy araka izay tianao ianao. More dia kely kokoa eto.
1. Fampiharana finday
Orinasa maromaro no namorona fampiharana, izay azon'ny mpanjifa apetraka ary azon'ny mpivarotra ampiasaina handefasana fampandrenesana an-app rehefa misy olona miditra amin'ny faritra voafefy.
2. Fifandraisana amin'ny soratra
Tsy misy orinasa te handany vola amin'ny varotra amin'ny fandefasana hafatra an-tsoratra isan'andro. Nampidirina ny Geofencing. Rehefa miditra amin'ny faritra misy geofenced ny mpanjifa iray dia ny hafatra an-tsoratra ihany no alefa.
3. Fampiharana antoko fahatelo
Ho an'ireo marika tsy manana ny fampiharana azy ireo dia azonao atao ny maka fanampiana amin'ny rindranasa an'ny antoko fahatelo handefasana fampahafantarana anao. Ohatra hoe firy ny trano fisakafoanana tsy manana ny fangatahany fa mbola azonao asongadina amin'ny rindranasa fisakafoanana sasany ny tolotra sy tapakilany.
4. Doka amin'ny media sosialy
Tsy maintsy ho nahatsikaritra ianao raha vantany vao nametraka fampiharana amin'ny haino aman-jery sosialy angatahin'izy ireo ny fahazoan-dàlana. Izany dia satria ny ankamaroan'ireo sehatra ireo dia manana fahaiza-manao geofencing ary miaraka amin'ny toerana misy anao dia afaka mahita doka momba ny faritra voafefy rehetra mety ho nolalovanao ianao.
5. Doka amin'ny Internet
Ireo doka ireo dia mitovy amin'ny doka amin'ny haino aman-jery sosialy miaraka amin'ny fahasamihafan'izy ireo fa hiredareda amin'ny navigateur mpanjifanao fa tsy fampiharana.
Ny marketing amin'ny geofencing dia tonga amin'ny maha-foto-kevitra mahaliana sy vahaolana futuristic amin'ny sakana ara-barotra rehetra, fa ahoana marina no mahazo ny marikao amin'izany? Ireto ambany ireto ny vokatra maka fanahy vitsivitsy entin'ny marketing geofencing amin'ny fitomboan'ny marikao.
1. Kendrena tsara kokoa
Geofencing dia manome ny tombony lehibe indrindra amin'ny fanaovana ny fampahafantaranao ho manan-danja kokoa. Azo inoana kokoa fa hifanerasera amin'ny mpanjifa ianao raha manatona olona akaiky ara-jeografika.
2. Varotra mahomby
Ny fampitomboana ny fandraisana anjara dia midika ho fanatsarana ny fandaniana ara-barotra. Miaraka amin'ny geofencing, azonao atao ny manatratra mpihaino marobe izay vonona ny hampiasa vola, ka mihena ny vola lany amin'ny mpanjifa tsy dia misy dikany loatra.
3. Fahitana tsara kokoa
Azonao atao ny mahazo hevi-dehibe momba ny lamin'ny fifamoivoizana (rehefa eo/akaiky ny toerana misy anao ny olona), ny faharetan'ny fitsidihana, ary ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra avy amin'ny sehatra mety.
4. Fanomezana tsara kokoa
Geofencing dia mameno banga izay efa nikendry hatry ny ela ny mpivarotra maro amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny dokam-barotra sy ny fampisehoana. Amin'ny fanombanana ny ROI, fanampiana lehibe izany satria azonao jerena ny faran'ny tonelina, ny fanentanana nataonao, ary ny valintenin'ny mpanjifa momba izany. Fahombiazana maharesy lahatra.
5. Ny marketing amin'ny finday dia izao
Nandray ny indostrian'ny dokambarotra ny finday. Ny antontan'isa dia manambara fa efa ho ny 90% amin'ny mpanjifa no maniry ny vaovao amin'ny finday noho ny loharano hafa. Araka ny antontan'isa ao amin'ny Google ihany koa, efa ho ny 71% amin'ny fifandraisan'ny mpividy dia miseho amin'ny finday mihitsy. Izany no mahatonga ny geofencing ho lasa vahaolana dokam-barotra mikendry tsara kokoa ho an'ny orinasa nomerika maro.
6. Kendrena manokana sy manokana araka ny tolotr'asanao
Ny marketing amin'ny geofencing dia manome anao fahafahana miditra amin'ny lohan'ny mpanjifanao sy ny habaka ary manolotra tanana. Diniho ny orinasa mpanolo-tsaina momba ny asa izay te hanatratra ireo mpianatra nahazo diplaoma. Ny fikajiana sekoly ambony sy oniversite manokana dia safidy tsara kokoa noho ny fampisehoana kisendrasendra ny dokao amin'ny radius 10 kilaometatra.
7. Fanadihadiana ara-potoana
Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny fampielezan-kevitra momba ny geofencing dia tsy mila miandry ianao vao hisy fiantraikany sy hanova tanteraka ny paikady. Ny fanentanana geofencing dia mazàna manome angon-drakitra amin'ny andro nanombohan'ny fanentanana. Mahazo fahafahana hanatsara ny paikadinao ianao araka ny valintenin'ny mpihaino.
8. Doka famoronana adaptif
Tsy toy ny takela-by izay azonao ovaina indray mandeha ao anatin'ny 6 volana, ny doka geofencing dia afaka mampifanaraka ny faritra sy ny mpihaino kendrena tsy misy olana. Azonao atao ny manatratra ireo matihanina amin'ny birao miaraka amin'ny fijery sy fahatsapana tsy dia mampientanentana loatra raha toa ka mitabataba amin'ny mpianatra amin'ny fotoana iray ihany.
Na dia be pitsiny aza ny hevitra momba ny marketing geofencing, dia marefo ihany koa. Mety misy tranga tsy misoratra anarana ny fitaovana na dia miditra amin'ny geofence aza. Ankoatr'izay, amin'ny toe-javatra hafa, rehefa apetraka manodidina ny magazay ny geofence, fa any amin'ny tanàna be olona sy faritra sarotra refesina hafa, dia mety hiteraka fifandraisana diso amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fitaovana.
Ny marketing amin'ny geofencing dia mety ho fandraisana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny fivarotanao na ny fifamoivoizana amin'ny tambajotra sosialy. Tsy maintsy mifantoka amin'ny mpihaino kendrenao ianao. Ny fahafantarana sy fakendrena toerana dia tsy hahavita ny fifanarahana ho anao. Raha mbola mazava tsara amin'ny fikarohanao sy ny tanjonao ianao dia afaka manangana fanentanana ara-barotra mahomby amin'ny geo-targeted.
Oniversite 10 ambony indrindra any Kenya 2022